Igumbi 6-Perfect noba yeyiphi indlela yeendwendwe ezi-1 ukuya kweziyi-2! I-Wifi-AC! - I-Airbnb
Igumbi 6-Perfect noba yeyiphi indlela yeendwendwe ezi-1 ukuya kweziyi-2! I-Wifi-AC!
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguEdson-Gen
Sinenkcazelo ngeyona ndlela yokuphila yasekuhlaleni, indlela yokuphila, kunye neendawo ezikufutshane ezinomtsalane kubakhenkethi kwaye sifuna ukwabelana ngezinto esinazo kunye nehlabathi! Sifuna into oyifunayo xa uhamba ngebhajethi: indawo yokuhlala ngaphandle kokuchitha imali okanye ukubhatalela izinto onokuzisebenzisa ongazidingiyo ngoxa usonwabela iindawo zokuhlala ezicocekileyo nezitofotofo zasekuhlaleni. Sifuna ukubonelela ngezisombululo ezifikelelekayo ukuze iindwendwe zethu zikwazi ukuchitha imali kwizinto ezibaluleke kakhulu: izinto ezinokonwatyelwa neenkumbulo.
I-V KUNYE NE- 'Guesthouse ikwindawo eyi-1 V&G engaphantsi kweSixeko saseTacloban. Le ndlu inemigangatho eyi-2 enamagumbi okulala ayi-9 namagumbi okuhlambela ayi-7 (ayi-4 asetyenziswa nangabanye abantu ayi-3). Inegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, indawo yegadi, kunye nendawo yokupaka.
Umgangatho wokuqala unamagumbi okulala ayi-4, izindlu zangasese eziyi-2 ezisetyenziswa ngumntu wonke, nendawo yokungena egadini nakwindlu yangasese kufuphi nezitepsi. Amagumbi okulala kumgangatho wesibini anemfihlo ngakumbi kuba zonke iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke zikumgangatho wokuqala. Iinkcukacha zegumbi lokulala ngalinye zichazwe ngezantsi:
Igumbi lokulala 1 – 1 Ibhedi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela 2.
Igumbi lokulala 2 – 1 Ibhedi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elinegumbi lokulala eliyi-1.
Igumbi lokulala 3 – 1 Ibhedi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elinegumbi lokulala 4.
Igumbi lokulala 4 - Iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye negumbi lokuhlambela elinegumbi lokulala 3.
Igumbi lokulala 5 - 2 iibhedi ezilala umntu omnye ezinegumbi lokuhlambela.
Igumbi lokulala 6 – 1 Ibhedi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela 7.
Igumbi lokulala 7 - Iibhedi ezikhweleneyo (iindwendwe ezi-2) kunye negumbi lokuhlambela elinegumbi lokulala 6.
Igumbi lokulala 8 - Iibhedi ezikhweleneyo (iindwendwe ezi-2) ezinegumbi lokuhlambela lazo.
Igumbi lokulala 9 – 2 iibhedi ezilala umntu omnye ezinegumbi lakho lokuhlambela.
- Amagumbi okulala aqeshiswa ngokwahlukeneyo kwaye alungiselelwe ukwamkela iindwendwe ezi-2 ngokukhululekileyo.
- Elona nani likhulu leendwendwe kumagumbi okulala lenzelwe iindwendwe ezi-2 okanye ezi-3.
- Elona nani likhulu lomntwana omnye ongaphantsi kweminyaka eyi-7 lihlala simahla.
- Iindleko ezongezelelweyo zebhedi yeP foam kumagumbi athile anokuhlala ibhedi eyongezelelweyo xa ucelile okanye ngaphambi kokubhukisha.
Ukuba umntu unqwenela ukuqeshisa ngendlu yonke (onke amagumbi okulala kumgangatho wokuqala nowesibini), nceda usithumelele i-imeyile ukuze ukhangele ukuba iyafumaneka na.
Ungafika nanini na emva ko-3 wasemva KWEMINI.
ngo-11 kusasa. Idiphozithi yokhuseleko xa uqeshisa ngendlu yonke iyasebenza. Nceda uthumele i-imeyile ukuze ufumane inkcazelo engakumbi..
Elona xesha liphela ngo-10:00 ebusuku.
Akutshaywa ngaphakathi Kwindlu Yeendwendwe
. Awekho amakhandlela okanye amalangabi avuliweyo.
Ayizilungelanga izilwanyana zasekhaya.
Sibiza imali eyongezelelekileyo ngeepati (iindwendwe ezingabhukishwanga) zibanjiwe. Ubuninzi bobuninzi be-30-40 umcimbi ngamnye. Isebenza kuphela xa uqeshisa ngendlu yonke okanye amagumbi okulala ayi-9.
. Coca ngoko nangoko emva kokusetyenziswa kwiindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke.
nkunkuma Kufuneka uvume nakwezi zinto zilandelayo:
. Kukho izitepsi ezimbini zokuya kumagumbi okulala
ayi-5-9.. Kusenokubakho ingxolo: Iimoto zidlula, izinja zibanda, abamelwane kunye neendwendwe zithetha.
. Igaraji yemoto eyi-1 ingasetyenziswa kuphela ukuba indlu yonke iqeshwe. Kungenjalo, iindwendwe kufuneka zipake iimoto zazo ngaphandle kwegaraji.
. Ezinye iindawo zisetyenziswa nangabanye abantu: Indlu yangasese kufuphi negaraji kunye neGarden Area.
Ukulinganiselwa kwezinto ezinokusetyenziswa: Izibane zongxamiseko nezibane ezikhanyayo ziyafumaneka ngexesha lokuphela kombane ebusuku, uxinzelelo lwamanzi olucothayo kumgangatho wesibini ngamaxesha axakekileyo, kwaye ngamanye amaxesha i-WiFi ayinamandla kwiindawo ezithile.
UKUBHUKISHA OKUQINISEKISIWEYO kukuvuma KONKE ukuchazwa okungentla.
Indlu engasemva ikwindawo ehlala abantu ibe uhamba nje imizuzu embalwa okanye uhamba ngemoto usiya kwindawo yentengiso, icawa, isikolo, isibhedlele. Iivenkile ezahlukahlukeneyo, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, ijimu. kunye nevenkile yokutyela zikude ngeekona eziyi-1-2. Imizuzu emihlanu xa uhamba ngemoto usiya eRobylvania Mall. Le ngingqi iza kukunika imvakalelo yendlela abaphila ngayo abantu basekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Edson-Gen
Ngaphandle kwe-V and Gs ’Guesthouse yindlu yombuki zindwendwe (ikhaya lika-Edson-Genevieve). Ababuki zindwendwe baza kukwazi ukuncedisa ekwenzeni amalungiselelo ezothutho okanye acebise ngeendlela ezifanelekileyo zothutho kunye/okanye ukuchaza indlela yokuya kwiindawo ozifunayo.
Ngaphandle kwe-V and Gs ’Guesthouse yindlu yombuki zindwendwe (ikhaya lika-Edson-Genevieve). Ababuki zindwendwe baza kukwazi ukuncedisa ekwenzeni amalungiselelo ezothutho okanye ac…